Blogger.com မှပုံတင်ရင် co.ccမှာမမြင်ရလို့ — MYSTERY ZILLION
Blogger.com မှပုံတင်ရင် co.ccမှာမမြင်ရလို့
November 2009 edited November 2009 in Blog
ကျွန်တော်က blogsport နဲ့ အကောင့်ဖွင့်ပြီး ဘလော့ရေးပါတယ် ၊ co.cc ကို ချိန်းလိုက်ပြီး ဘလော့စပေါ့ကနေ ပုံတင်တဲ့ အခါ co.cc မှာ ပုံအဖြစ်မမြင်တွေ့ရဘူးဖြစ်နေပါတယ် ဘာကြောင့်လည်းဆိုတာ ကူညီပေးပါခင်ဗျ
co.ccမှာ ပုံတွေပေါ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ် ဆိုတာ လမ်းညွှန်ပေးပါအုံးခင်ဗျ
November 2009 edited November 2009 Registered Users, Moderators
NaNge wrote: »
blogspot နဲ့ရေးရင် blogspot.com မှာကော ပေါ်လားကြည့်ကြည့်ပါ။
အကောင်းဆုံးကတော့ မိမိတင်ထားတဲ့ blogspot.com နဲ့ co.cc link လေးတွေ တင်ပေးနိုင်ရင် ၀ုိင်း၀န်းကြည့်ပေးလို့ရပါလိမ့်မယ်..
နငယ်က မြန်မာနိုင်ငံကပဲထင်တယ်။ blogspot မှာတင်ထားတာကို co.cc မှာမမြင်ရဘူးဆိုတာကတော့ blogspot ကိုဘန်းထားလို့ပါ။ blogspot မှာပုံတင်ထားတဲ့အတွက် link ကလဲ blogspot လင့်အတိုင်းပဲသွားတာပါ။ co.cc လုပ်ထားပေမယ့်လဲ ပုံတင်ထားတဲ့ link ကချိန်းသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ ပုံပေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ တိုက်ရိုက်လင့်ခ်ပေးတဲ့ upload ဆိုဒ်တစ်ခုခုမှာတင်ပြီးမှ အဲဒီကလင့်နဲ့ပဲ တင်ပေါ့။ တိုက်ရိုက်လင့်ပေးတဲ့ upload ဆိုဒ်တော့ ကျွန်တော်လဲမသိဘူးဗျ။ သိတဲ့လူများလာရောက်ဝေမျှပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ pages.google.com ကိုသုံးပါတယ်။ pages.google.com ကလဲ အရင်ကလူတွေပဲသုံးလို့ရတော့တာပါ။ အခုအသစ်ထပ်လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။
November 2009 edited November 2009 Registered Users
ညမီးအိမ် wrote: »
googlepage လဲမရတော့ပါ. googlesite ကိုရွှေ့သွားတဲ့အတွက် direct link အနေနဲ့ရတော့မည်မဟုတ်ပါ။ ဘလော့များအတွက် http://imageshack.us ကအဆင်ပြေပါတယ်။ ကျွန်တော်ဘလော့မှာပုံတင်ရင်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတင်ပါတယ်. စမ်းကြည့်လိုက်ပါ . နောက်ပိုင်း multi upload တောင်ရနေပါပြီ
စတားလေးက ကျွန်တော်ရေးထားတာကို သေချာမတွေ့ဘူးထင်တယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ pages.google.com ကိုသုံးပါတယ်။ pages.google.com ကလဲ အရင်ကလူတွေပဲသုံးလို့ရတော့တာပါ။ အခုအသစ်ထပ်လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။
အဲလိုရေးထားတယ်လေ။ user အဟောင်းတွေကတော့ သုံးလို့ရနေဆဲပါပဲ။ အသစ်သာထပ်လုပ်လို့မရတော့တာ။ ကျွန်တော်ရဲ့ pages.google.com လေးကတော့ အခုထိသုံးလို့ရဆဲပါပဲ။
http://picasaweb.google.com မှာတင်ပါ picasa ကိုဒေါင်းထားလိုက်ရင် ကြိုက်တဲ့ပုံကို အဲဒီထဲကနေ တိုက်ရိုက် login လုပ်ပီးတင်လို့ရပါတယ် နဲနဲပါးပါးဖြတ်ကပ်ညှပ်လဲလုပ်လို့ရပါတယ်
ပုံတင်တဲ့ဆိုက်တွေတော့ရှိပါတယ် ကျတော်လဲမေ့နေတယ် ။ တိုက်ရိုက်တင်တာဆိုရင် blogger or blogspot ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တင်ရင် ကြည့်လို့ရရပါမယ် co.cc ကျော်ထားရင် youtube တောင်ကြည့်လို့ရပါတယ် လိုင်းကျနေလို့ ဓာတ်ပုံတွေမပေါ်တာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
ကိုယ့် ဘလော့ page ကိုတအားပြင်ထားရင်လဲ script တွေ run နေရလို့ကြာတတ်ပါတယ်။
အပြင်အဆင်သိပ်များတဲ့ ဘလော့တွေဟာ ကိုယ့် home page ပွင့်လာဖို့ကို connection အပေါ်မူတည်ပီး စောင့်ရတာမျိုးရှိပါတယ်။ တစ်ချို့ဓာတ်ပုံတင်တဲ့ဆိုက်ဒ်တွေကိုဘန်းထားတတ်သလို တစ်ချို့script file တွေ run ရတာများ ရင် လဲကြာတတ်ပါတယ် အချိန်နဲနဲပေးပီးစောင့်ကြည့်ပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ် ၂ မိနစ်လောက်ပေါ့ အလွန်ဆုံးစောင့်ရ အဲလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ တစ်ခြား error ရှိတာဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်